Fanavaozana ny hery
"Fa izay miandry an'i Jehôvah dia mandroso hery kosa; elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; handeha izy, nefa tsy ho reraka." - Isa. 40:31.
Tsy maintsy manana fahasahiana sy hery ny miaramila iray raha te hahazo fahombiazana -amin'ny ady izay ataony. Raha miankina amin'ny tenantsika isika dia malemy sy osa. Kanefa manana ilay fampanantenana isika hoe: Fa izay miandry an'i Jehôvah dia mandroso hery kosa». - L, t. 156, 1903. 46.
Hiseho ireo sakantsakana eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra; kanefa aza matahotra. Avy ao amin'ilay fahefana tsy hita fetra ananan'ilay Mpanjakan'ny mpanjaka no hanehoan'ilay Andriamanitsika, izay mpitandrina ny teny nomeny, ny hatsaram-panahy sy ny fiahian'ny mpiandry ondry malemy fanahy. Tsy misy afaka ny hijoro eo amin'ny lalany. Tsy hay tohaina ny heriny, ary izany no antoky ny fahatanterahan'ny teny fikasana nomeny ny vahoakany. Hainy ny manala ny sakana rehetra amin'ny fampandrosoana ny asany. Mampiasa ny fomba rehetra Izy mba hanesorana ny zava-tsarotra rehetra, ka hanafahany ireo mpanompony izay manaja ny fitaovana ampiasainy. Tsy hita fetra ny hatsarany sy ny fitiavany, ary tsy azo ovana ny fanekena nataony.
Mety hiseho ho mafy orina sy maty paika ny planin'ireo fahavalo, kanefa azony arodana ny paika tsara sy mafy indrindra amin'ireo, ary hotanterahiny izany amin'ny fotoana sy ny fomba izay hitany fa mahamety izany, rehefa hitany fa efa voazaha toetra tsara ny finoantsika ary manakaiky Azy sy mametraka Azy ho mpanolo-tsaina isika.
Ao anatin'ny andro maizina indrindra, izay toa tena mampihorohoro tokoa, dia aza matahotra. Manana finoana an'Andriamanitra. Manatanteraka ny sitrapony Izy ary manao ny zavatra rehetra ho an'ny vahoakany. Hohavaozina isan'andro isan'andro ny herin'ireo izay tia sy manompo Azy. Azony an-tsaina tsara ny manjo azy ireo ary vonon-kanampy Izy, mba tsy hanaovan'izy ireo hadisoana eo amin'ny fanatanterahana ny sitrapony.
Tsy tokony hisy fahakiviana ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy maintsy mizaka ny vesatra izay mitambaby aminy ny finoantsika. Afaka ary vonona ny handrotsaka amin'ny mpanompony ny hery rehetra izay ilainy Andriamanitra. Hihoatra lavitra noho izay antenain'ireo mametraka ny fitokiany Aminy no hotanterahiny. - TFC 8:10,11.